ZANDARIMARIA – ANTENIMIERANDOHOLONA : “Volam-panjakana madiodio no nividianana ireo fitaovam-piadiana” – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:01
Ampahany tamin’ireo fitaovam-piadiana azo.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/ZANDARIMARIA – ANTENIMIERANDOHOLONA : “Volam-panjakana madiodio no nividianana ireo fitaovam-piadiana”
ZANDARIMARIA – ANTENIMIERANDOHOLONA : “Volam-panjakana madiodio no nividianana ireo fitaovam-piadiana”
Niakatra tetsy amin’ny Antenimierandoholona omaly, ireo tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena nanazava ny momba ny nahazoana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika, azo ny taona 2019. Volam-panjakana madiodio ary tafiditra tao anatin’ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2018 no nividianana izany. Misy loholona tsy mahay ny asany ve ao sa mikendry fanakorontanana?
Rado Harivelo 19 décembre 2020
Ireo zandary nitondra fanazavana tao amin’ny Lapa Maitso Anosy, omaly.
Nampanantsoina tao amin’ny Vaomiera mpanadihady eo anivon’ny Antenimierandoholona ny Tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, mahakasika ny fividianana fitaovam-piadiana mahery vaika, omaly. Araka ny fahazoan’ny ao amin’ny Antenimierandoholona, dia nampidirina an-tsokosoko teto Madagasikara ireo basy mahery vaika azon’ny Zandarimariam-pirenena, ny taona 2019 ireo, araka ny fanazavan’ny Jly Kassimo Arona Besony, Talen’ny Fampitaovana sy fandraharahana. “Rehefa nohazavaina teo anatrehan’ireo loholona ny zava-misy, teo amin’ny pitsopitsony rehetra momba ny fahazoana ireo fitaovam-piadiana, dia volam-panjakana, ary volan’ny Zandarimariam-pirenena madiodio. Tamin’ny lalàna mifehy teti-bolam-panjakana 2018 no natokana nividianana ireo fitaovam-piadiana ireo”, hoy izy nanazava. Nasongadin’ny Jly Kassimo Arona Besony fa “rehefa nifandresy lahatra teo amin’ny famotopotorana moa, dia niaiky ry zareo, fa ny avy ao amin’ny Antenimierandoholona ihany no nandany io lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2018 io. Hita tao anatin’ny sorabola, izay nofidin-dry zareo io sora-bola momba ny fividianana fitaovam-piadiana mahery vaika azon’ny Zandarimariam-pirenena ireo”. Midika izany fa tsy nampidirana an-tsokosoko ireo fitaovam-piadiana ireo, ary volam-panjakana madiodio no nanefana izany.
Tiana ny manamarika, hoy hatrany ny Talen’ny Fampitaovana sy fandraharahana fa nisy fanafangaroana resaka nivoaka, avy ao amin’ny Antenimierandoholona, izay milaza fa nisy fampidirana fitaovam-piadiana an-tsokosoko, nandritra ny fianianan’ny Filoham-pirenena tamin’izany fotoana. Tsy marina velively izany, raha ny fanazavana satria fitaovam-piadiana an’ny Zandarimaria irery ihany no niditra teto. Mazava ny fidiran’ireo fitaovam-piadiana ireo teto sy ny pitsopitsony rehetra. Raha tsiahivina, naranty tamin’ny 24 jona 2019 ireo fitaovam-piadiana vaovao azon’ny Zandarimaria ireo. Nambaran’ny Jly Kassimo Talen’ny Fampitaovana sy fandraharahana hatrany fa “rehefa misy fitaovam-piadiana azo, alohan’ny hanatanterahana ny asany ny Zandarimaria, dia tsy maintsy aseho amin’ny vahoaka ireo fitaovana azo, mba hanatontosany ny tamberina andraikitra ho azy ireo”.
Ny fitaovam-piadiana azo dia mitentim-bidy 15 miliara ariary ary novidina tany Sina. Tsy fitiavana te hividy fitaovam-piadiana fotsiny fa iaraha-mahalala ny tsy fandriampahalemana miseholany eto Madagasikara. Nanteriny fa raha tsy misy ny fandriampahalemana, tsy misy fampandrosoana. Avy amin’izay no nahatonga ny Zandarimaria nividy ireo fitaovam-piadiana ireo, mba hisian’ny fampandriana fahalemana maharitra eto amin’ny tany sy ny Firenena. Rehefa misy ny fitaovam-piadiana, dia afa-mametraka ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny Zandary ary afa-miaro ny andrim-panjakana, izay misy eto Madagasikara.
Loholona tsy mahay ny asany ?
Tiana ny manamarika fa efa tamin’ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2018 no fantatra fa nisy ny fividianana fitaovam-piadiana ho an’ny Zandarimariam-pirenena, izay tamin’ny andron’ny fitondrana HVM. Nanaraka dingana sy pitsopitsony ara-dalàna avokoa ny fanatanterahana izany. Ny fahazoana ireo fitaovam-piadiana kosa, ny volana marsa 2019. Ny manaitra, ny fanosoram-potaka tanterahin’ny ekipan-dRivo Rakotovao sy ny tariny, fa nisy fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika, avy amin’ny Fitondrana ankehitriny. Mazava teo anatrehan’ny Antenimierandoholona ny dingana sy ny momba ireo fomba nahazoana ny fitaovam-piadiana, tamin’ny alalan’ny fanazavana ireo dingana avy amin’ny Tomponandraikitry ny fampitaovana sy fandraharahana eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Ny Fanjakana amin’izao fotoana, izay miezaka mandrakariva hiaro ny vahoaka sy ny fananany amin’ny fomba matihanina. Sao ny filohan’ny Antenimierandoholona sy ireo loholona vitsivitsy eo anivon’ny andrim-panjakana ity no tsy mahafehy ny asany, ka tsy hainy akory ny fandanian-dalàna ataony, kanefa lalàna mifehy ny tetibola nolaniany, ny taona 2018, ihany izany.